Mu’asasada Waxbarashada ALMANAAR
Bayaanka furitaanka saminaarka 1aad ee macalimiinta dugsiyada ahliga ah
Maanta oo Arbaca ah 12/8/1424 oo ku beegan 8/10/2003 waxaa laga furay dugsiga Cumar ibnul Khaddaab ee magaalada Hargaysa siminaar loogu tala galay sare u qaadista xirfadda iyo aqoonta barbaarineed ee macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada ahliga ah ee magaalada Hargaysa.
Ujeedooyinka siminaarkan waxaa ka mid ah:
1. Sare u qaadista xirfadda barbarineed ee macalimiinta
2. In la dareensiiyo macalimiinta waajibka ka saaran in ay si wanaagsan u barbaariyaan ardayda ay gacanta ku hayaan
3. In laysku xidho macalimiinta dugsiyada iyo culimada/ducaadda ku hawlan islaaxinta bulshada
4. ka hortagga duullaanada halista ah ee ku wajahan tacliinta islaamiga ah.
5. Midaynta dadaalka dacwadeed ee dugsiyadu sida gaar-gaarka ah u wadaan
6. In la daboolo baahida dacwo ee dugsiyadu u baahanyihiin, iyada oo la ogsoonyahay inay dugsiyadu kaalin muhiim ah kaga jiraan dacwada islaamiga ah xilligan.
Siminaarkan waxaa soo qabanqaabiyay mu’asasada waxbarashada ALMANAAR oo ay hoos yimaadaan 12 dugsi oo ay wax ku bartaan qiyaastii 9000 oo arday iyo ardayad, waxaana siminaarkan ka faa’iidaysanaya 105 macalin oo dugsiyada Hargaysa wax ka dhiga, waxaana duruusta bixin doona 7 macalin oo aqoon dheeraada u leh tarbiyada, duruusta siminaarkan lagu qaadan doono waxaa weheliya dood cilmiyeedyo lagu qaadaa dhigi doono mawaadiic barbaarinta la xidhiidha.
Maamulka Mu’asasada Waxbarashada ALMANAAR
Waxaa warkan soo diraya Sh. Xasan Maxamed Ibraahim (Abuu Xasaan) oo beryahan nala joogay, isaga ayaana halkan ka qabanqaabiyey siminaarkan.. waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu ka aqbalo dadaalka uu wado isaga iyo ragga kale ee walaaladii . .
Waxaa Siminaarkan ka qayb qaadanaya culimo badan oo ay ka mid yihiin:
Sh. Yuusuf Aadan (from Abu Dhabi)
SH. Maxamed Cumar Dirir (Shiikha Hargeisa)
Sh. Xasan Maxamed Ibraahim (Abu Xasaan)
Sh. Mustafe X. Ismaaciil (Hargeisa + Norway)
iyo rag kale oo badan ..